Vatauri vane AirPlay 2 kubva kuKEA uye Sonos vatotomisirwa | Ndinobva mac
Iwo mafemu maviri ari kujoina masimba kuvhura mutsva mutsara weAirPlay 2 inoenderana michina inonzi Symfonisk. Iyi tambo yechigadzirwa yakasiyana nezvimwe zvese nechikonzero chakakosha, Icho chiri tafura yemwenje ine mutauri weWiFi uye pasherufu mutauri zvakare akangwara, iyo IKEA naSonos vakasika kuti vape chinodikanwa chiri kukura
Icho chirongwa chitsva chakamisikidzwa mukati meZita reSYMFONISK uye icho chinopa zvirokwazvo vashandisi mutambo wakanyanya. Sonos chiratidzo chinozivikanwa chevatauri uye cheSweden yakasimba IKEA nekuti isu hatidi mharidzo kana, saka mafemu maviri aya ajoina nzira yavo uye Ivo vanotangisa aya mutauri nyowani nechiedza.
Nezve iyo SYMFONISK renji
Iyo SYMFONISK renji inosanganisira iyo SYMFONISK tafura mwenje neWiFi mutauri uye SYMFONISK yemabhuku shefu mutauri neWiFi. Zvese zvigadzirwa zvinowirirana neSonos 'yega mhando yezvigadzirwa uye zvinogona kutarisirwa pamwechete kuburikidza neSonos app. Chii chimwe ivo vanotangisa iyo SYMFONISK tafura mwenje ine WiFI mutauri chinhu icho, pamusoro pekuvhenekera kamuri, chine mutauri wakavakirwa mukati kuti utipe ruzha rwakanakisa. Iyo SYMFONISK tafura yemwenje inosanganisa mwenje neruzha mune chimwe chigadzirwa, chimwe chinhu icho vazhinji vevashandisi vefirm chaicho chavanoda uye icho zvakare chine mutengo unodhura kwazvo uchifunga nezve mhando yemhando inopihwa naSonos, inodhura euros gumi nemashanu.
Kune rimwe divi isu tine SYMFONISK shelufu yemabhuku ine Wi-Fi mutauri. Mune ino kesi, pamusoro pekuve chinhu chekushongedza, mutauri unowedzerwa mukati uyo unotibvumidza kuti titeerere kumimhanzi yedu yatinofarira chero mumba. Inogona kuvanzwa kana kuratidzwa chero kupi uye inokwanisa kutsigira huremu hunosvika kumakirogiramu matatu nechigadziko. Mutengo wekutengesa weSYMFONISK shefu-mutauri iri 99,95 euros. Zvese zvigadzirwa zvinowirirana neAirPlay 2 uye HomeKit.
Sonos Mumwe, akagadzirira kukwikwidza musoro-ku-musoro nechero mutauri akachenjera
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » Accessories » IKEA uye Sonos AirPlay 2 vatauri vava pamutemo